9 मार्केटिंग उपकरण तपाईलाई उत्तम ब्लग सामग्री छिटो बनाउन मद्दत गर्न Martech Zone
सामग्री मार्केटिंगको विन्दु के हो?
के यो महान् सामग्रीहरू विकास गर्ने र बहु ​​श्रोताहरू मार्फत तपाईंको श्रोताको ध्यान खिच्नको लागि प्रचार गर्ने बारेमा हो?
खैर त्यो सबैभन्दा ठूलो अंश हो। तर सामग्री मार्केटिंग यस भन्दा धेरै हो। यदि तपाईं ती आधारभूतहरूमा तपाईंको दृष्टिकोण सीमित गर्नुहुन्छ भने, तपाईं एनालिटिक्स जाँच गर्नुहुनेछ र तपाईंले महसुस गर्नुहुनेछ कि सामग्रीले महत्त्वपूर्ण ट्राफिकलाई आकर्षित गरेको छैन।
ClearVoice सर्वेक्षण गरिएको १,००० मार्केटरहरू पत्ता लगाउन के सब भन्दा ठूला सामग्री चुनौतीहरू थिए। ठूला चुनौतिहरूको सूचीमा सामग्रीको गुणस्तर, सामग्री सिर्जना र स्केलिंग समावेश थियो, तर यो अझै अगाडि बढ्यो।
समय, विशेष गरी, सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो। तर बजारहरू पनि विचार, प्रतिभा, वितरण, रणनीति, सगाई, र स्थिरता संग संघर्ष गरे। जब यी सबै कारकहरू सीमित समयसीमामा राखिन्छन्, हामी समस्यामा पर्दछौं।
त्यसोभए हामी हेर्छौं कि सामग्री मार्केटिंग, यसको सारमा, हामीमध्ये धेरैले आशा गरे भन्दा जटिल छ। तपाईंले सेट गर्नुभएको समय सीमा भित्र सबै लक्ष्यहरू पूरा गर्न तपाईंले दक्षता-चालित मानसिकतामा प्रवेश गर्न आवश्यक छ।
सहि उपकरणहरूले त्यसका साथ मद्दत गर्दछ!
9 सामग्री मार्केटिंग उपकरण तपाइँलाई समय अवरोधहरू पार गर्न मद्दत गर्न
एडगरलाई भेट्नुहोस् - तपाईं महान ब्लग सामग्री को विकास मा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहानुहुन्छ। यदि कसैले (वा केहि) वितरण अंशको हेरचाह गर्न सक्दछ भने, तपाईंले आफ्नो अर्को पोष्टहरूमा ध्यान दिन धेरै समय प्राप्त गर्नुहुनेछ। एडगर तपाईंलाई चाहिएको सहयोगी उपकरण हो। तपाईं यसको प्रणालीमा पोष्टहरू शेड्यूल गर्नुहुनेछ, र त्यसपछि एडगरले स्वचालित रूपमा ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इन्स्टाग्राम, र पिन्टेरेस्टका लागि स्थिति अपडेटहरू लेख्नेछ। उपकरण सदाबहार सामग्री रिसाइक्लि forको लागि महान छ। यसले तपाइँको ब्रान्डलाई प्रासंगिक रहन सुनिश्चित गर्दछ तपाइँले चाहानु हुने जस्तो धेरै पटक नयाँ सामग्री निर्माण नगरे पनि।
Quora - जब तपाईसँग शीर्षकहरू लेख्नको लागि विचारहरूको अभाव हुन्छ, लेखकको अवरोधले अधिक समय लिन सक्दछ। तपाईं यी विचारहरू कहाँ पाउनुहुन्छ? तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूले के लेख्छन् भनेर तपाइँ देख्न सक्नुहुन्थ्यो, तर तपाइँ तिनीहरूलाई प्रतिलिपि गर्न चाहनुहुन्न। यहाँ एक उत्तम विकल्प छ: तपाईको लक्षित श्रोताले के सोचिरहेछ भनेर हेर्नुहोस्।
सम्बन्धित Quora कोटीमा प्रश्नहरू जाँच गर्नुहोस्, र तपाईं तुरुन्तै केहि शीर्षक विचारहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ।
पाब्लो - तपाईंको सामग्रीको दृश्य तत्वहरूले धेरै फरक पार्छ। तपाईलाई फेसबुक, पिन्टेरेस्ट, गुगल +, इन्स्टाग्राम र अन्य सबै च्यानलहरूका लागि फरक ग्राफिक्स वा छविहरू चाहिन्छ।
पाब्लोको साथ तपाईको कामको त्यो अंश सजिलो छ। तपाईं प्रत्येक पोष्टको लागी सुन्दर दृश्यहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। पुस्तकालयमा K० के भन्दा बढि छविहरू छन्, ताकि तपाई सजिलैसँग भेट्टाउन सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको सामग्रीसँग मिल्छ। त्यसो भए, तपाई तिनीहरूको पोस्टबाट उद्धरणको साथ अनुकूलन गर्न सक्नुहुनेछ, र फरक सामाजिक मिडिया नेटवर्कको लागि उचित आकार छनौट गर्नुहोस्।
हेमिंगवे एप - सम्पादन गर्न धेरै समय लिन्छ, हैन? एकचोटि तपाईले ब्लग पोष्ट लेख्न सक्नु भएपछि, तपाई = यसलाई छिट्टै पार गरेर यसलाई प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ। तर तपाईंले सम्पादन चरणमा बढी ध्यान दिनु पर्दछ; अन्यथा तपाईं भ्रमपूर्ण शैलीको साथ अपूर्ण ड्राफ्टहरू प्रकाशन जोखिममा लिनुहुन्छ।
हेमिwayवे अनुप्रयोगले तपाईंको कामको यो हिस्सा यसलाई सजिलो बनाउँदछ। यसले व्याकरण र हिज्जे त्रुटिहरू समात्दछ। तर त्यो सबै होइन। उपकरणले तपाईंलाई जटिलता, विज्ञापनविज्ञापन, र अन्य तत्वहरू बारे सन्देश दिन्छ जुन सन्देश कमजोर पार्दछ।
केवल सिफारिशहरूको पालना गर्नुहोस् र तपाईंको सामग्री पढ्न सजिलो बनाउनुहोस्।
ProEssay लेखन - माथिका सूचीबद्ध उपकरणहरूले तपाईंको सामग्री मार्केटि campaign अभियानको विभिन्न पक्षहरू प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्दछ, तर लेख्ने अंशको बारेमा के हुन्छ? तपाईंलाई थाहा छ तपाईं सफ्टवेयरमा भरोसा गर्न सक्नुहुन्न जब यो आउँछ।
तर एक वा अर्को बिन्दुमा तपाई अडिनुहुन्छ। तपाईंसँग योजनाबद्ध सामग्री तालिका छ तर तपाईं समयमा सबै पोष्टहरू लेख्न प्रबन्ध गर्न सक्नुहुन्न। हुनसक्छ तपाईं लेखकको ब्लकको बीचमा हुनुहुन्छ। हुनसक्छ यो केवल जीवन भइरहेको छ र तपाईंले लेखलाई ब्रेकमा राख्नुपर्दछ।
यस्तो अवस्थामा, एक पेशेवर लेखन सेवा धेरै मद्दत गर्न सक्छ। प्रोइसेराइटिaएउटा प्लेटफर्म हो जहाँ तपाईं विशेषज्ञ वर्गका लेखकहरूलाई विभिन्न कोटीहरूमा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईं तिनीहरूलाई निर्देशन दिनुहुन्छ र ती तपाईंको अन्तिम मिति द्वारा १००% अद्वितीय सामग्री डेलिभर गर्नेछन्।
सर्वश्रेष्ठ निबन्ध - सर्वश्रेष्ठ निबन्ध अर्को उच्च सम्मानित सामग्री लेखन सेवा हो। तपाईं कुनै पनि विषयमा ब्लग पोष्ट अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ, यो तथ्यलाई दिएर कि कम्पनीले अध्ययनको विभिन्न क्षेत्रका लेखकहरू राख्छ। सर्वश्रेष्ठ निबन्ध उच्च गुणवत्ताको सेतो कागजातहरू र ईबुकहरूका लागि उत्कृष्ट हो, तर तपाईले सामग्रीको सरल टुक्राहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईंलाई आवश्यक पर्दछ।
यो सेवाले तपाईंलाई वास्तवमै छोटो म्यादहरू (१० दिन देखि days घण्टा सम्म) सेट गर्न दिन्छ, र तपाईंले समयमै डेलिभरीको लागि ग्यारेन्टी पाउनुहुन्छ।
उत्कृष्ट कागजहरू - यदि तपाईं लामो अवधिमा सामग्री लेखन हिस्सा प्रतिनिधि बनाउने योजना बनाउनुहुन्छ, सुपीरियर पेपर्स एक उत्तम विकल्प हो। जब तपाईं रुबी वा डायमंड सदस्यता छान्नुहुन्छ, तपाईं नियमित आधारमा छुट पाउनुहुनेछ। साथै, तपाईं टोलीका सर्वश्रेष्ठ लेखकहरूसँग काम गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाइँ एक विशेष लेखकसँग सहकार्य गर्न थाल्नुहुन्छ र तपाइँले के पाउनुहुन्छ मनपर्दछ, तपाइँ फेरि उही विशेषज्ञलाई भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ।
मद्दत लेख्नको अतिरिक्त, सुपीरियर पेपर्सले व्यावसायिक सम्पादन सेवाहरू पनि प्रदान गर्दछ।
ब्रिल असाइनमेन्ट लेखन सेवा - यो एक बेलायती लेखन सेवा हो। यदि तपाईंको ब्लग ब्रिटिश दर्शक मा लक्षित छ, एक अमेरिकी लेखक पर्याप्त शैली प्राप्त गर्दैन। त्यो अवस्थामा, ब्रिल असाइनमेन्ट सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो।
लेखकहरूले सबै प्रकारका शीर्षकहरूमा शीर्ष-गुणवत्ता सामग्री पुर्‍याउँछन्। ब्लग पोष्टका साथै तपाई केस स्टडीहरू, पावरपोइन्ट प्रेजेन्टेसनहरू, ग्राफिक डिजाइन प्रोजेक्टहरू, र अधिक पनि अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ।
अस्ट्रेलियाई लेखन - अष्ट्रेलियाई लेखन एक लेखन एजेन्सी हो जुन हामीले माथि उल्लेख गरेका केहि अरू समान छ। भिन्नता, नाम आफैंले सlies्केत गर्दछ, यो यो कि असि बजारलाई लक्षित गर्दछ। त्यसोभए यदि तपाईंलाई यो देशका लेखकहरू आवश्यक छ भने सही शैलीमा हिट गर्नको लागि, जहाँ तपाईं तिनीहरूलाई फेला पार्नुहुनेछ।
मूल्यहरू पहिले नै सस्तो हो, तर कम्पनीले नियमित प्रयोगकर्ताहरूको लागि ठूलो छुट पनि दिन्छ।
समय बचत गर्नु ठूलो कुरा हो। जब तपाइँ तपाइँको सामग्री मार्केटिंग अभियान अधिक उत्पादक बनाउँनुहुन्छ, तपाइँ ट्राफिक प्राप्त गर्न र श्रोतालाई कार्य गर्नका लागि विश्वस्त गर्न थाल्नुहुनेछ। आशा छ, माथि सूचीबद्ध उपकरणहरूले तपाइँलाई त्यहाँ पुग्न मद्दत गर्दछ।
टैग: अस्ट्रेलियाका लेखहरूउत्तम निबन्धब्रिलब्रिल असाइनमेन्ट लेखन सेवासामग्री मार्केटिङसामग्री मार्केटिंग संसाधनहरूसामग्री सेवाहरूहेमिंग्वे अनुप्रयोगएडगरलाई भेट्नुहोस्पाब्लोराम्रो कागजात
के ड्रोन डेलिभरी चाँडै टिप्न गइरहेको छ?